अरुलाई बचाएर नयाँ जीवन दिने डाक्टर पूज्यश्री कार्कीको कोरोनाबाट निधन ! – Dainik Samchar
May 19, 2021 110
काठमाडौं, ५ जेठ । आँखारोग विशेषज्ञ डाक्टर पूज्यश्री कार्कीको निधन भएको छ । उनको कोराना भाइरसको संक्रमणबाट आज विहान निधन भएको हो ।
नर्भिक अस्पतालमा डा. कार्की १० दिनदेखि आइसियूमा उपचाररत थिइन् । प्राध्यापक समेत रहेकी डा. कार्की किष्ट मेडिकल कलेजमा आँखा रोग विभागकी प्रमुख थिइन् ।
नेपाल मेडिकल कलेजबाट एमबीएस गरेकी डा.कार्कीले धरानबाट एमडी गर्नुका साथै अमेरिकामा समेत अध्ययन गरेकी थिइन् । उनका पति प्रराब्ध सिजापती पनि डाक्टर नै हुन् । उनीहरुका दुई छोरा छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् , हरेक दिन कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बढी भिडभाड हुने स्थानमा परीक्षणलाई तीव्र बनाएको छ ।
कोभिडको सङ्क्रमण अवस्था पहिचान गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न कामपा र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले संयुक्तरूपमा एन्टिजेन परीक्षण थालेका हुन् । परीक्षणका क्रममा मङ्गलबार कालीमाटी तरकारी बजारमा ४०२ जनामा एन्टिजेन परीक्षणमा गरिएकामा १२ जनामा पोजिटिभ देखिएको कामपाले जनाएको छ । आज टुकुचा तरकारी बजारमा परीक्षण गरिने छ ।
परीक्षण मात्रै होइन, परीक्षणका क्रममा समस्या बढी भएका बिरामीका लागि एम्बुलेन्समा राखी अस्पतालसम्म लाने र ल्याउने व्यवस्थासम्म कामपाले नै गर्दै आएको छ । यसका लागि नागरिकले पैसा तिर्नु पर्दैन । यसरी कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीका लागि एम्बुलेन्ससँग कामपाले दुई हप्ताअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ ।
उक्त सेवा कामपाको २३ वडामध्ये सात स्थानबाट नागरिकले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कोरोनाका बिरामीले मात्रै नभई अन्य दीर्घ रोग भएका कसैलाई अस्पतालसम्म जान र आउन परेमा पनि कामपाले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जो कोहीले ११८० कामपाको हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ । हाल कामपामा ११ हजार ६३१ कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।-रासस
Prevमहान छोरी – ४७ बर्षिय बुवा यस्तो हुदानी साथ छो’डेनन, दि’सापिसाब यसरि स्याहार गर्दै, म’न थामेर हेर्नुस भिडियो
Nextमलाई माफ छोरी : तिमी बाबा आउनु भन्दै रोइरहेकी थियौ तर म आउनै सकिनँ’
कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्ने तयारी
जमिन चिरा परेपछि गाउँमा त्रास
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (595)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (594)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (583)
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना,हुँदा ५ विद्यार्थीको मृत्यु मनमा दया भए (RIP) लेख्नुहोला:, ’ (570)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (565)
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ? (561)